मधेश आन्दोलनमा यसरी लुटिए सयौं युवाको बलिदानी र उर्जाः कहाँ छन् मधेश आन्दोलन हाँक्ने ती युवा ? « Today Khabar
मधेश आन्दोलनमा यसरी लुटिए सयौं युवाको बलिदानी र उर्जाः कहाँ छन् मधेश आन्दोलन हाँक्ने ती युवा ?
प्रकाशित ९ असार २०७६, सोमबार १२:५६
काठमाडौंः पहिलो मधेश आन्दोलन भएको १३ वर्ष भइसक्यो । त्यतिबेला मधेश आन्दोलन उठान गर्न युवाहरुको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण थियो । यद्यपि, आन्दोलनका लागि अहोरात खट्ने अधिकांश मधेशी युवाहरु अहिले भने प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न देखिएका छैनन् ।
२०६३ सालतिर मधेशको नाम लिने अवस्था थिएन । कोही आन्दोलनमा आउन तयार थिएनन् र त्यतिबेला केही युवा नेताहरुले आँट गरेर आन्दोलन जगाए । जसले सडक तताए, आज उनीहरु नै सेलाएका छन् ।# साभारः रातोपाटीबाट